Abahlinzeki be-Canned Tomato abahlinzeki nefektri - China Abakhiqizi Bamatamatisi Abakheniwe
Utamatisi unamathisela ungukudla kwansuku zonke. Kungenza ukudla kube mnandi futhi kube nempilo kubantu. Singenza ikhwalithi ehlukile ngokwezicelo zamakhasimende nezinga lekhwalithi yemakethe, unamathisela utamatisi ojwayelekile umbala obomvu wemvelo, u-100% ngaphandle kwezithasiselo, ujiyile futhi awunamanzi. Singakwenza unamathisela we-GINO wekhwalithi yetamatisi. "I-Quality First" ngaso sonke isikhathi iyisimiso sethu sokucubungula unamathisele utamatisi. Imboni yethu ihlanganisa indawo engama-58,740 metres, ukukhiqizwa kwamanje kungamathani angama-65,000, si ...